ဗဟုသုတ Archives - Achawlaymyar
ေျခမထက္ ေျခညႇိဳး ရွည္တဲ့ သူေတြကို ဘာ့ေၾကာင့္ လက္မလႊတ္သင့္တာလဲ ? . . .
October 27, 2021 by Achawlaymyar
ေျခမထက္ ေျခညႇိဳး ရွည္တဲ့ သူေတြကို ဘာ့ေၾကာင့္ လက္မလႊတ္သင့္တာလဲ ? . . . ေျခညႇိဳးဟာ ေျခမထက္ရွည္တဲ့ သူေတြေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားရွိ ပါလိမ့္ မယ္။ အဲလို လူေတြရဲ႕ ျဖစ္တတ္တဲ့ စိတ္သေဘာ ထားေတြကို တင္ျပေပး လိုက္ပါ တယ္။ သူတို႔မွာ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိေန ပါတယ္။ ေယာက်ားေလး ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းကေလး ပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔လို လူေတြကိုေ တြ႕ရင္ေတာ့ လက္မလြတ္ လိုက္ပါနဲ႔။ ေျခမထက္ ေျခညႇိဳး ရွည္တဲ့ သူေတြကို ဘာ့ေၾကာင့္ လက္မလႊတ္သင့္တာလဲ ? . . . ေျခမထက္ ေျခညႇိဳး ရွည္တဲ့ သူေတြကို ဘာ့ေၾကာင့္ လက္မလႊတ္သင့္တာလဲ ? … Read more
အဘိုး နဲ့ အဘွားအိုကပေးတဲ့တန်ဖိုးဖျက်မရတဲ့ သင်ခန်းစာ
လူငယ်လင်မယားနှစ်ယောက် ဟာ..အိမ်ထောင်ကျစကတည်းကရက်ခြားဆိုသလို ရန်ဖြစ်လေ့ရှိကြတယ်။ တဲ့အခါလူငယ်က အရမ်းစိတ်ပျက်လာပါတယ်။တစ်နေ့ သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီး..စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အိမ်ရှေ့မှာ တစ်ယောက်တည်း ထိုင်နေရင်းအိမ်ရှေ့အိမ်က အသက်အရွယ်အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ လင်မယားနှစ်ဦး အိမ်ထဲကရီရီမောမော နဲ့ထွက်လာတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ သူဟာ နေ့တိုင်းထိုအဘိုးအဘွားလင်မယား နှစ်ဦးကိုသတိထားပြီး စောင့်ကြည့်မိတော့တယ်.. နေ့တိုင်းဆိုသလိုပဲထိုအဘိုးအဖွားလင်မယားနှစ်ဦးမနက်ဆိုလမ်းလျှောက်ထွက်ရင် လက်ချင်းချိတ်ပြီး သွားကြတယ်။အပြန်ကျရင် အဘိုးက ခြင်းတောင်းလေးဆွဲပေးရင်းအဘွားက အဘိုးလက်မောင်းလေးကို တွဲလာရင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဈေးဝယ် ပြန်လာကြတာကို နေ့စဉ်ဆိုသလို တွေ့ရဖန်များလာတော့လူငယ်က တစ်နေ့မနေနိုင်တော့ပဲ …အဘိုးတစ်ဦးတည်း အိမ်ရှေ့မှာ ရှိနေစဉ် သွားနှုတ်ဆက်ရင်းသူသိချင်တာလေးကို မေးလိုက်တော့တယ်။”အဘိုးတို့ လင်မယားကြည့်ရတာအမြဲလိုလို ချစ်ချစ်ခင်ခင် ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ပျော်ရွှင်နေလိုက်ကြတာကျွန်တော်တို့ကျတော့ ယူပြီးကတည်းကဖြစ်လိုက်ကြတဲ့ ရန်တွေ။ အဘိုးနဲ့အဘွား ရန်မဖြစ်ပဲ အေးအေးချမ်းချမ်း ဘယ်လိုနေကြလဲ သိချင်လို့ပါ”ဆိုတော့ အဘိုးက .. “မင်းတို့လင်မယားနှစ်ဦးစလုံးကအရမ်းကောင်းတဲ့သူတွေမို့ ရန်ဖြစ်နေကြတာ၊ အဘိုးတို့လင်မယားနှစ်ဦးစလုံးကမကောင်းဘူးဆိုတော့ ရန်မဖြစ်ကြပဲ ခုလိုသင့်မြတ်နေကြတာပေ့ါ”…တဲ့ လူငယ်က အဘိုးရဲ့အဖြေကို … Read more
လိုက်ရှာနေတာကြာပီ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ ( တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာ )
လိုက်ရှာနေတာကြာပီ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ ( တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာ ) စာဖတ်တာ မေ့သွားမယ့်တူတူ ဘာလို့စာဖတ်ရတာလဲ။တစ်နေ့မှာ မြေးအဘိုးနှစ်ယောက် မြစ်ကမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီး စကားပြောနေကြတယ်။မြေးဖြစ်သူက အဘိုးကိုမေးတယ်။ ”ဘိုးဘိုး… ဘိုးဘိုး နေ့တိုင်းစာဖတ်တာ.. ဘယ်လောက်မှတ်မိသလဲ။ မေ့သွားမယ့်တူတူ ဘာလို့ စာဖတ်ရတာလဲ”အဘိုးက မြေးကိုပြုံးပြပြီးပြောတယ်။ ”ဟိုးနားက မီးသွေးထည့်တဲ့ ခြင်းကြားသွားယူခဲ့ ငါ့မြေး”မြေးက နားမလည်စွာနဲ့ ညစ်ပတ်မည်းညစ်နေတဲ့ ခြင်းကြားကိုသွားယူခဲ့တယ်။ “ကဲ.. အဲဒီခြင်းကြားနဲ့ မြစ်ထဲကရေကို ခပ်ခဲ့” လို့ အဘိုးပြောတော့ မြေးက ပိုဇဝေဇဝါဖြစ်သွားပေမယ့် အဘိုးပြောသလို ခြင်းကြားနဲ့ ရေသွားခပ်ပါတယ်။ ခြင်းက ရေထည့်မရဘူးဆိုတာ ကြည့်တာနဲ့သိသာနေပါတယ်။ မြေးက ခြင်းကို ရေထဲနစ်လိုက်တယ် မ လိုက်တယ်။ ရေတစ်စက်မှ ပါမလာခဲ့ဘူး။ အဘိုးသူ့ကို ဘာလုပ်ခိုင်းမှန်း သူနားမလည်ဖြစ်ရတယ်။ အဘိုးက ထပ်စမ်းပါဦးလို့ပြောလို့ သူလည်း … Read more
ေမြးကင္းစ ကေလးေတြနဲ႔ လသားအ႐ြယ္ ကေလးေတြက အိပ္ေနရင္းနဲ႔ ၿပဳံးေနတတ္ပါတယ္..။ သူတို႔ရဲ႕ အၿပဳံးက အရမ္းကို ခ်စ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ အျပစ္ကင္းစင္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အၿပဳံးကို မိဘေတြကလည္း အရမ္းသေဘာက် ၾကပါတယ္..။ အဲဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြက အိပ္ေနရင္း ၿပဳံးရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို love media ကေန ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္ေနာ္..။ ကေလးေတြက မေမြးခင္ကတည္းက ၿပဳံးတတ္ၾကပါတယ္..။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ကို 4D ultrasound ႐ိုက္တဲ့အခါ ၃၁ ပတ္အ႐ြယ္ ကေလးေလးေတြက ၿပဳံးေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္..။ သူတို႔ရဲ႕ ၿပဳံးခ်ိန္က ပ်မ္းမွ် ၃. ၂၁ စကၠန႔္ ၾကာပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြကို မေမြးခင္အေမရဲ႕ ဗိုက္ထဲမွာကတည္းက ၿပဳံးတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္..။ ပညာရွင္ေတြက … Read more
” ငါလာမွ သီး၊ ငါလာမွ ႀကီး “မကၽြတ္လြတ္ေသးတဲ့ ဗိႆနိုးဘုရင္မ ပန္ထြာရဲ့ အမုန္းက်ိန္စာနဲ႔ ေပပင္ေလး‌ေတြ…….
October 26, 2021 by Achawlaymyar
” ငါလာမွ သီး၊ ငါလာမွ ႀကီး “မကၽြတ္လြတ္ေသးတဲ့ ဗိႆနိုးဘုရင္မ ပန္ထြာရဲ့ အမုန္းက်ိန္စာနဲ႔ ေပပင္ေလး‌ေတြ ငါလာမွသီး ၊ငါလာမွႀကီး ” တဲ့လားေဖေဖ ၊ သူ႔က်ိန္စာကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသလို .. ေပပင္ေလးေတြကလည္း ႏွစ္ရာေထာင္ခ်ီေနတာေတာင္ သုံးေလးေပက မတက္ဘူးေနာ္…၊ သူ႔နတ္နန္းမွာ ဘာလို့ ဘီလူးမႀကီးနဲ႔ တြဲထားရတာလည္း ေဖေဖ ၊ ၾကည့္ရတာ တမ်ိဳးႀကီးပဲ … ” ဗိႆနိုးၿမိဳ့ထဲ ဝင္သြားခ်ိန္ကစလို့တိတ္ဆိပ္ေခ်ာက္ခ်ားစြာနဲ႔ ေနရာတစ္ခုခ်င္းဆီကို စိတ္ဝင္စားစြာ ၾကည့္ေနေပမယ့္ စိတ္အစဥ္ကေတာ့ ဟိုး ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ခန႔္က စည္ကားခဲ့တဲ့ဗိႆနိုးၿမိဳ့ႀကီးရယ္ ၊သေရေခတၱရာဆိုတဲ့ ဒြတၱေဘာင္တို့ရဲ့ ျပည္ၿမိဳ့ႀကီးရယ္.. ၊အင္မတန္ေခ်ာေမာလွပတယ္ဆိုတဲ့ ပန္ထြာဘုရင္မရယ္ ..၊ ငယ္ငယ္ကအရမ္းသေဘာက်ခဲ့တဲ့ အတုလစည္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ စည္တီးရင္ ေရႀကီးတဲ့ ရန္ပယ္ေခ်ာင္းရယ္ .. ရဟန္းတုေတြက … Read more
ဘဝမွာ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတိုင္း “ေရငတ္ေနေသာ က်ီး”ကိုသတိရလိုက္ပါ
တစ္ခါတုန္းက အရမ္းပူျပင္းတဲ့ေန႔တစ္ေန႔မွာေပ့ါ.. က်ီးတစ္ေကာင္ဟာ ေရငတ္လြန္းတာေၾကာင့္ေကာင္းကင္မွာပ်ံသန္းရင္း ေရအရွာထြက္ပါသတဲ့။ လြင္ျပင္တီးေခါင္တစ္ေလွ်ာက္မနားတမ္းရွာေပမယ့္လည္း ေရတစ္စက္ေတာင္ မေတြ႕ရေလဘူး။ ၾကာလာေတာ့ က်ီးလည္းေရငတ္လြန္းတာက တစ္ေၾကာင္း၊ပင္ပန္းလြန္းတာကတစ္ေၾကာင္းနဲ႔အားနည္းလာပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကုန္လုကုန္ကာနီးအခ်ိန္က်မွ က်ီးဟာသစ္ပင္ေအာက္မွာ ေရခရားေလးတစ္ခုကိုလွမ္းေတြ႕လိုက္ပါသတဲ့။ေရအရမ္းဆာေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ က်ီးဟာ အလြန္အမင္း ဝမ္းသာသြားတာေပ့ါ။ အဲဒါနဲ႔ ေရခရားရွိတဲ့သစ္ပင္ေအာက္ကို အလ်င္အျမန္ပဲ သြားပါသတဲ့။ အဲဒီ့အခ်ိန္မွာပဲေရဆာေနတဲ့ က်ီးအတြက္ ကံေကာင္းတာေကာ၊၊ ကံဆိုးတာေကာ တစ္ၿပိဳင္တည္း ႀကဳံရပါတယ္။ကံေကာင္းတာကေတာ့ ေရခရားထဲမွာေရလက္က်န္ေတြရွိေနသေလာက္ကံဆိုးတာကေတာ့ ေရခရားဟာလည္ပင္းအဝက်ဥ္းတဲ့ အတြက္ က်ီးဘယ္လိုပဲႀကိဳးစားႀကိဳးစား ခရားထဲမွာ ရွိတဲ့ေရကိုေသာက္လို႔မရဘူး ျဖစ္ေနသတဲ့။လည္ ပင္းအဝက်ဥ္းတဲ့ ခရားထဲကို က်ီးဟာေခါင္းထိုးၿပီး ေရေသာက္ရဖို႔အတြက္အားထုတ္ေပမယ့္လည္း ႀကိဳးစားမႈမွန္သမွ်အရာမေရာက္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့လိုနဲ႔စိတ္ဓါတ္က်ၿပီး ေငးငိုင္ေနတဲ့ က်ီးဟာမ်က္စိေရွ႕မွာ ျမင္လိုက္ရတဲ့ေက်ာက္စရစ္ခဲကိုေတြ႕ၿပီးအႀကံအစည္တစ္ခု ရသြားပါတယ္။ေက်ာက္စရစ္ခဲေလးကို ပါးစပ္နဲ႔ကိုက္ၿပီးေရခရားထဲကို ပစ္ခ်လိုက္ေတာ့ခရားထဲမွာရွိေနတဲ့ေရေတြဟာ အနည္းငယ္ျမင့္တက္လာပါတယ္။ ေက်ာက္စရစ္တစ္ခဲက ႏွစ္ခဲ၊ ႏွစ္ခဲက သုံးခဲနဲ႔ေက်ာက္စရစ္အခဲေပါင္းမ်ားစြာေရခရားထဲ ခ်လိုက္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ေရေတြကအျပင္ထိထြက္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ … Read more
မယုံဘူးဆိုရင် လက်တွေ့စမ်းသပ်ဖို့ အုတ်ခဲတစ်ခဲနဲ့ ပုဆိုးတစ်ကွင်းပဲ လိုပါတယ်
မယုံဘူးဆိုရင် လက်တွေ့စမ်းသပ်ဖို့ အုတ်ခဲတစ်ခဲနဲ့ ပုဆိုးတစ်ကွင်းပဲ လိုပါတယ် မယုံဘူးဆိုရင် လက်တွေ့ စမ်းသပ်ဖို့ အုတ်ခဲ တစ်ခဲနဲ့ ပုဆိုးတစ်ကွင်းပဲ လိုပါတယ်..။ လုပ်ကြည်ပါ။ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ဖို့ အုတ်ခဲ တစ်ခဲနဲ့ ပုဆိုးတစ်ကွင်းပဲ လိုပါတယ်..။ ညောင်းငြာကိုက်ခဲသူများအတွက် ဆေးထိုးဆေးစား၊အနှိပ်အနင်းမလိုဘဲ လက်တွေ့သက် သာပျောက်ကင်းစေသောနည်းလေးအား တင်ပြလိုက်ပါသည်။ ကိုယ်လက်ညောင်းညာကိုက်ခဲသူများ၊ဒူးနာခါးနာသူများ အတွက် လွန်စွာအသုံးတည့်ပါသည်။ ကုတင်တစ်လုံးပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်အိပ်ပြီး ပုဆိုးတွင်အုတ်နီခဲကျိုး(၁)လုံး(သို့) (၂)လုံးကိုလိပ်ပြီး နဖူးကိုချိတ်ဆွဲပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခါးပတ်ပြားကြီးကြီး၊ကြိုးပြားကြီးကြီးများဖြင့်လည်းဆွဲနိုင် ပါသည်။ လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်တန်းထားပြီ ခြေနှစ်ဖက်ကိုစုထားပါ။ မိမိခန္ခာကိုယ်ခံနိုင်ရည်ရှိမည့် အလေးချိန် အတိုင်းအတာ ကိုဆွဲကြည့်ပါ။ ဒူး၊ခါး၊တစ်ကိုယ်လုံး အရိုးအကြောများ တရှိန်းရှိန်း နှင့်ပါလာပါလိမ့်မည်။ (၁၅)မိနစ်၊ နာရီဝက်၊(၄၅)မိနစ်စမ်းကြည့်ပါ သိသိသာသာကြီး အကြောအချဉ်များ ပြေခြင်း ၊ဒူးနာ၊ခါးနာများ သက်သာ ပျောက်ကင်းခြင်းကို အမှန်ခံစားရပါမည်။ အမှတ်မထင် မိတ်ဆွေတစ်ဦးအိမ်တွင် … Read more
ကလေးတွေကို စနစ်တကျ ငွေစုတတ်အောင် သင်ကြားပေးဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ငွေကို စနစ်တကျ သုံးစွဲတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်က အသက်ကြီးတဲ့အထိ စွဲသွားပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်း ရှိတာက ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ အဓိကအချက်တွေထဲက တစ်ခုပါ။ “လူဆိုတာ ငွေနဲ့နေ့စဉ် ဆက်ဆံရတယ်။ တစ်သက်လုံးလည်း ဆက်ဆံသွားရမယ်။ အဲဒါကြောင့် ငွေကို စနစ်တကျ သုံးစွဲတတ်ဖို့က ဘဝမှာ အရေးကြီးပါတယ်”လို့ Sammy Rabbit စာအုပ်တွေကို ရေးခဲ့သူ Sam X Renick က ပြောပါတယ်။ ကလေးတွေကို ငွေအကြောင်းအသက် ၃ နှစ်၊ ၄ နှစ်ကနေ စသင်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ကလေးကို စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင် ခေါ်သွားပြီး ငွေကို တစ်ခုခုဝယ်ရန် သုံးကြောင်း၊ ငွေရဖို့ ဘယ်လို ရှာဖွေရကြောင်း ပြောပြပါ။ … Read more
သွေးအမျိုးအစားအလိုက် မွေးရာပါအားသာချက်တွေနဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်မျာ…း
သွေးအမျိုးအစားအလိုက်မွေးရာပါအားသာချက်တွေနဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်များ သွေးအမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသိနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သွေးအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းဆီမှာမတူညီတဲ့မွေးရာပါအားသာ ချက်တွေနဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပါ။ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် ၁ Aသွေးအမျိုးအစားအေသွေးပိုင်ရှင်လေးတွေဟာအရမ်းကိုတိကျတယ်၊စေ့စပ်သေချာတယ်၊အသေးစိတ်တယ်၊ဇီဇာကြောင်တယ်ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ဟာသူများတွေ ထက်ထူးချွန်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ချို့သူတွေကလည်းဒီအကျင့်တွေကြောင့်ပဲသူတို့ကိုအမြင်ကပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ငြိမ်ပြီးအရှက်ကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တာ ကြောင့်စကားဝိုင်းတွေမှာပြောသူမဟုတ်ပဲနားထောင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။စိတ်ထိခိုက်လွယ်တဲ့သွေးပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဝမ်းနည်းလွယ်ပါတယ် ၂ Bသွေးအမျိုးအစားဘီသွေးလေးတွေဟာစိတ်ရှင်းပြီးခင်မင်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အရမ်းရိုးသားတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အတွေးတွေကိုအမြဲထုတ် ပြောတတ်တဲ့သူတွေပါ။တစ်ခါတလေလူတစ်ချို့အတွက်အနာပေါ်တုတ်ကျဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးစိတ်မဝင်စားရင်လှည့်ကိုမကြည့်ချင်တဲ့သူတွေပါ ၃ Oသွေးပိုင်ရှင်များအိုသွေးလေးတွေဟာပြသနာဖြေရှင်းရာမှာအရမ်းတော်တဲ့သူတွေပါ။တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့အရမ်းကောင်းတဲ့သူတွေပါ။သူတို့လေးတွေဟာ အသေးစိတ်လွန်းတာမျိုးကိုမကြိုက်ပါဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချို့သူတွေအမြင်မှာတော့မာနကြီးလွန်းတယ်လို့မြင်တတ်ကြ ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ရင်းကောင်းပြီးစာနာစိတ်အရမ်းရှိတဲ့သူတွေပါ ၄ ABသွေးပိုင်ရှင်များအေဘီသွေးလေးတွေဟာမျက်နှာနှစ်ခုရှိတဲ့သူတွေလို့တစ်ချို့ကပြောကြပါတယ်။အေသွေးတွေရဲ့စေ့စပ်သေချာမှု၊တိကျမှုမျိုးကိုလည်းပိုင်ဆိုင် ထားသလိုဘီသွေးတွေလိုလွတ်လပ်တဲ့စိတ်သဘောကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြန်ပါတယ်။တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စါမ်းအရမ်းကောင်းတာကြောင့်ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့သွေးပိုင်ရှင်တွေပါ cred unicode သှေးအမွိုးအစားအလိုကမြှေးရာပါအားသာခကွတြှနေဲ့ပငကြိုယစြရိုကမြွား သှေးအမွိုးအစားကိုလိုကပြှီးတော့လူတဈယောကရြဲ့အကှောငြးကိုသိနိုငပြါတယြ။ဘာဖှဈလို့လဲဆိုတော့သှေးအမွိုးအစားတဈခုခငွြးဆီမှာမတူညီတဲ့မှေးရာပါအား သာခကွတြှနေဲ့ပငကြိုယစြရိုကတြှကေိုပိုငဆြိုငထြားလို့ပါ။ဖတကြှည့လြိုကပြါဦးနောြ ၁ Aသှေးအမွိုးအစားအသှေေးပိုငရြှငလြေးတှဟောအရမြးကိုတိကတွယြ၊စေ့စပသြခွောတယြ၊အသေးစိတတြယြ၊ဇီဇာကှောငတြယဒြါကှောင့ပြဲသူတို့ဟာသူမွားတှ ထကေထြူးခွှနကြှပါတယြ။ဒါပမယေ့လြညြးတဈခွို့သူတှကလေညြးဒီအကငွ့တြှကှေောင့ပြဲသူတို့ကိုအမှငကြပနြတတေကြှပါတယြ။ငှိမပြှီးအရှကကြှီးတဲ့သူတှဖှ ဈေတာကှောင့စြကားဝိုငြးတှမှောပှောသူမဟုတပြဲနားထောငသြူတှဖှဈေကှပါတယြ။စိတထြိခိုကလြှယတြဲ့သှေးပိုငရြှငတြှဖှဈေတာကှောင့ဝြမြးနညြးလှယပြါတ ယြ ၂ Bသှေးအမွိုးအစားဘီသှေးလေးတှဟောစိတရြှငြးပှီးခငမြငနြှဈလိုဖှယကြောငြးတဲ့သူတှဖှဈေပါတယြ။အရမြးရိုးသားတာကှောင့သြူတို့ရဲ့အတှေးတှကေိုအမှဲထုတ ပြှောတတတြဲ့သူတှပေါ။တဈခါတလလေူတဈခွို့အတှကအြနာပေါတြုတကြဖွှဈသှားတာမွိုးလညြးဖှဈသှားတတပြါတယြ။စိတဝြငစြားတဲ့အရာတဈခုကိုအကော ငြးဆုံးလုပနြိုငကြှတဲ့သူတှဖှဈေပှီးစိတမြဝငစြားရငလြှည့ကြိုမကှည့ခြငွတြဲ့သူတှပေါ ၃ Oသှေးပိုငရြှငမြွားအိုသှေးလေးတှဟောပှသနာဖှရှငြေးရာမှာအရမြးတောတြဲ့သူတှပေါ။တိုငပြငဆြှေးနှေးလို့အရမြးကောငြးတဲ့သူတှပေါ။သူတို့လေးတှဟော အသေးစိတလြှနြးတာမွိုးကိုမကှိုကပြါဘူး။ကိုယ့ကြိုယကြိုယုံကှညမြှုအပှည့ရြှိတဲ့သူတှဖှဈေပါတယြ။တဈခွို့သူတှအမှေငမြှာတော့မာနကှီးလှနြးတယလြို့မှငတြ တကြှပါတယြ။ဒါပမယေ့လြညြးစိတရြငြးကောငြးပှီးစာနာစိတအြရမြးရှိတဲ့သူတှပေါ ၄ ABသှေးပိုငရြှငမြွားအဘေီသှေးလေးတှဟောမကွနြှာနှဈခုရှိတဲ့သူတှလေို့တဈခွို့ကပှောကှပါတယြ။အသှေေးတှရေဲ့စေ့စပသြခွောမှု၊တိကမွှုမွိုးကိုလညြးပိုငဆြိုင ထြားသလိုဘီသှေးတှလေိုလှတလြပတြဲ့စိတသြဘောကိုလညြးပိုငဆြိုငထြားပှနပြါတယြ။တီထှငဖြနတြီးနိုငစြါမြးအရမြးကောငြးတာကှောင့ဉြာဏကြှီးရှငတြှအဖှေ ဈသတမြှတခြံထားရတဲ့သှေးပိုငရြှငတြှပေါ cred သွေးအမျိုးအစားအလိုက်မွေးရာပါအားသာချက်တွေနဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်များ သွေးအမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသိနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သွေးအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းဆီမှာမတူညီတဲ့မွေးရာပါအားသာ ချက်တွေနဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပါ။ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် ၁ Aသွေးအမျိုးအစားအေသွေးပိုင်ရှင်လေးတွေဟာအရမ်းကိုတိကျတယ်၊စေ့စပ်သေချာတယ်၊အသေးစိတ်တယ်၊ဇီဇာကြောင်တယ်ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ဟာသူများတွေ ထက်ထူးချွန်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ချို့သူတွေကလည်းဒီအကျင့်တွေကြောင့်ပဲသူတို့ကိုအမြင်ကပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ငြိမ်ပြီးအရှက်ကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တာ ကြောင့်စကားဝိုင်းတွေမှာပြောသူမဟုတ်ပဲနားထောင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။စိတ်ထိခိုက်လွယ်တဲ့သွေးပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဝမ်းနည်းလွယ်ပါတယ် ၂ Bသွေးအမျိုးအစားဘီသွေးလေးတွေဟာစိတ်ရှင်းပြီးခင်မင်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အရမ်းရိုးသားတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အတွေးတွေကိုအမြဲထုတ် ပြောတတ်တဲ့သူတွေပါ။တစ်ခါတလေလူတစ်ချို့အတွက်အနာပေါ်တုတ်ကျဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးစိတ်မဝင်စားရင်လှည့်ကိုမကြည့်ချင်တဲ့သူတွေပါ ၃ Oသွေးပိုင်ရှင်များအိုသွေးလေးတွေဟာပြသနာဖြေရှင်းရာမှာအရမ်းတော်တဲ့သူတွေပါ။တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့အရမ်းကောင်းတဲ့သူတွေပါ။သူတို့လေးတွေဟာ … Read more
မာမာရဲ့ ပဲကောက်ညှင်းဆွမ်းမွှေးပြန်ပေါင်းလုပ်နည်းလေး ငှက်ပျောရွက်ရှိရင် ငှက်ပျောရွက်နဲ့ ပေါင်းနိူင်သလို မာမာကတော့ ဆွမ်းမွှေးရွက်တွေ ရှိနေတာနဲ့ ဆွမ်းမွှေးရွက်လေးတွေရယ် အုန်းသီးဖတ်လေးတွေရယ်နဲ့ ပေါင်းတဲ့အတွက် အရမ်းကို စားလို့ကောင်းလွန်းလို့ ကောက်ညှင်းပြန်ပေါင်း ပေါင်းနည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ကောက်ညှင်းဆန် – ၃ ဗူး (ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး) ကုလားပဲခြမ်း – ၁ ဗူး (ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး) ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ဆီ – ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း ခွဲ အုန်းသီးခြစ်ပြီးသား – မိမိနှစ်သက်သလောက် ဆွမ်းမွှေးရွက် – ၂ရွက် ငါးခြောက် – မိမိနှစ်သက်သလောက် ပဲဆီစိမ်း … Read more